[APK] Es File Explorer emelitere ka mbipute 4.1 | Gam akporosis
[APK] Njedebe File Explorer na-enweta nnukwu mmelite mgbe adware dị na ya
Ọ bụ mkpebi dị oke njọ na ES File Explorer were mgbe ị na-ewepụta ihe ọhụụ nke mechara bụrụ okwu gbasara monetizing ngwa ahụ kama ịnye ọrụ ọhụụ. Anyị atụleworị n'ọtụtụ oge nnukwu nsogbu maka monetization nke ngwa maka ọtụtụ ndị mmepe. Ọ bụghị ndị mmemme niile maara banyere ahia, ọ na-egosi ngwa ngwa. Mkpebi ndị ahụ emeghị nke ọma nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu, dịka o mere na ES File Explorer na ọtụtụ puku ndị ọrụ na-achọ ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na emelitere ya ugbu a na ụdị dị elu, ọ nwere ike ịbụ na ọ ga-egbu oge ịnwale ịnweta ndị ọrụ ahụ niile. Ọbụna mgbe wepụrụ atụmatụ ahụ maka adware, ha chọrọ mmelite iji gbalịa ilepụ anya ma hapụ ihe ndị ha mehiere. 4.1.dị nke XNUMX gụnyere isi mmeghari ohuru Aha njirimara ES File Explorer.
Nmeghari ohuru a n’ile ihe ngosi n’ile n’ihu nke oma n’ile anya nye ihe omuma na ohere eji na dị na ngwaọrụ. Enwekwara mkpirisi ole na ole ọzọ na ngwaọrụ ndị etinye na ngwa ahụ, yana "faịlụ ọhụụ" na-egosi nke pụtara dịka onye ọrụ na-agbadata. Eziokwu bụ na ebe a ka ha mee kaadị ha nke ọma site na ịnye ozi kachasị mkpa site na isi ihuenyo.
Ha echefukwala nkọwa na oge a ha ewepụla igbe ngbanye / ngbanye na nchịkọta nhọrọ akụkụ, isiokwu na-acha anụnụ anụnụ na-adọrọ adọrọ karị na a interface na ozi ndị ọzọ na ihuenyo ngwa. 4.1.dị XNUMX na-abịa na Storelọ Ahịa Play na usoro, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ya, ị nwere ike ịga na nbudata aka na apkmirror.
Download ES File Explorer APK 4.1
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » [APK] Njedebe File Explorer na-enweta nnukwu mmelite mgbe adware dị na ya
A ga-emelitekwa ụdị PRO?
Zaghachi Roberto Vélez
Chọpụta, ọ kwesịrị.
Samsung Galaxy S8 nwere ike inwe mkpebi UHD na nhazi igwefoto abụọ
Nchịkọta RAM dị iche iche nke OnePlus 3 bụ iji kwado ndụ batrị